मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम महिला मुख्य लक्ष्य • Anumodan National Daily
मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम महिला मुख्य लक्ष्य
प्रकाशित मिति : 12th October 2018
धनगढीमा महिला तथा बालिकालाई लक्षित गरी सात दिने आत्मरक्षा शिविर सञ्चालन भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी भएका करिब सत्र सय महिला तथा बालिकाले सात दिनसम्म आत्मरक्षाका सीपकला सिक्ने मौका पाए । शिविरमा राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण दिए । महिलाका लागि आत्मरक्षा शिविरको मुख्य उद्देश्य, सहभागीको रेस्पोन्स, आगामी दिनका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्रिय गोजुरियो कराँते दो एसोसिएसन, नेपालका सचिव तथा प्रशिक्षक रजनी थापासँग अनुमोदनका विशेष संवाददाता शेरबहादुर ऐरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
केन्द्रीय सचिव एवं प्रशिक्षक
राष्ट्रिय गोजुरियो कराँते दो एशोसियनसन नेपाल
महिला आत्मरक्षा शिविरको मुख्य उद्देश्य के हो ?
महिलालाई आत्मरक्षासम्बन्धी आवश्यक सीपकला, ज्ञान प्रदान गरेका छौं । अब उहाँहरूले सिकेका कुरा आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने हो । त्यसका लागि आत्मसामथ्र्य, उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि खाना पकाइयो, तर नचाखेसम्म कस्तो बन्यो भन्ने थाहा हुँदैन नि । मैले बलात्कार, महिला हिंसा कसरी हुन्छ । त्यस्तो बेलामा कसरी आफ्नो रक्षा गर्ने भन्नेबारे शैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान सीप प्रदान गरे । आफूमाथि कुनै किसिमको आक्रमण हुँदा आफ्नो सास रहेसम्म आफ्नो रक्षा गर्ने र अरूलाई पर्दा उनीहरूको पनि रक्षा गर्ने यो तालिमको उद्देश्य हो ।
प्रशिक्षार्थीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
यो तालिमबाट म निकै खुसी छु । म काठमाडौंमा बस्छु । तालिम धनगढीमा भइरहेको छ । काठमाडौंका मान्छेले पनि यो तालिमको प्रतीक्षामा रहेका छन् । पूर्वबाट अहिले यो तालिम यता गरिदिएको भए हुने थियो भनिरहेका छन् । हाम्रो सात वटै प्रदेशमा यो तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सबैतिरबाट यो तालिमको माग भइरहेको छ । यो तालिममा सहभागी भएका प्रशिक्षार्थीहरूबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं ।
यो तालिम सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै किन शुरुवात गर्नु परेको त ?
पहिलो कुरा, जहिले पनि जे कुराको पनि शुरुवात काठमाडौंबाट हुन्थ्यो । म रजनी सचेतना फाउण्डेसनमा आवद्ध छु । त्यो मैले यहि प्रदेशको बैतडी जिल्लाबाट शुरुवात गरे । यसमा पनि के हो भने भन्छन् नि ‘समयले के माग्छ र कथाले के माग्छ ?’ भन्ने कुरा हो । अहिलेको परिवेशमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । जहाँ जे भइरहेको छ, त्यसको सन्देश मान्छेले छिटो सुन्ने र बुझने हुन्छ । यहिको घटना भएकाले यहाँका महिलालाई सक्षम बनाइयो भने यहाँको हावाले अन्य प्रदेशमा पनि छुने भएकाले यो प्रदेश छनौट गरेका हौं ।
आगामी दिनका के कस्ता योजना छन् ?
आगामी दिनमा महिलाहरूलाई आत्मरक्षामा सक्षम बनाउने तथा आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि सात वटा प्रदेशमा यो तालिम लग्ने र सकेसम्म विश्व रेकर्ड ‘गिनिज बुक’ मा नाम लेखाउने योजना रहेको छ । किताबमा नाम लेखिनु सबै कुरा होइन् । मुख्य कुरा भनेको महिलालाई आफ्नो आत्मरक्षा र आफूलाई परेको बेला स्वयं आफ्नो र अरूलाई पर्दा उनीहरूको पनि रक्षा गर्न सक्षम बनाउने मुख्य उद्देश्य हो ।
यो तालिमबाट महिलाहरू आत्मरक्षाका लागि सक्षम बने भन्ने कत्तिको विश्वास गर्नुभएको छ ?
कुरा के हो भने कुनै पनि तालिममा सहभागी भएका मध्ये त्यसको प्रयोग गर्ने वा चाहनेको संख्या १५, २० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यो तालिममा पहिला हाम्रो लक्ष्य एक हजार जनालाई सहभागी बनाउने थियो । पछि यो संख्या १६/१७ सय पुग्यो । यो किन भयो भने उहाँहरूले यो तालिमबाट फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास भयो । पहिला तालिम कस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेले बुझ्न खोज्यो । जब तालिम राम्रो हुन्छ र यो तालिम जीवनमा कार्यान्वयन गर्दा आत्मरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छन् ।
अलिकति फरक प्रसंग । बलात्कारका घटनाका दोषिलाई के गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
मैले वा हामीले बोल्दैमा त्यो कुराको समाधान हुँदैन । त्यो कुरा राज्यले बुझेर कानून बनाउनु पर्‍यो र कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । अहिले निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या घटनामा कानून बनाउने व्यक्तिहरू नै यसमा संलग्न रहेको भन्ने सुनेकी छु । कानूनबाट केही हुँदैनन् भन्ने मैले मेरो पक्षबाट महशुस गरेकी छु । त्यसको लागि महिलाहरूले कि क्रान्ति ल्याउनु पर्‍यो, नत्र भने यसको समाधान मैले देखेकी छैन ।
तालिमबाट महिलाले के प्राप्त गरे ?
पुरुषले आएर मेरो ईच्छा विरुद्ध मेरो शरीरको कुनै अंगमा हात त हाल्दैन भन्ने डर मलाई छ । त्यो महसुस गर्दा मन र दिमागमा जुन पीडा हुन्छ, त्यो पीडाबाट माथि उठ्नका लागि म यो शिविरमा आवद्ध भए । यो तालिमले महिलालाई मानसिक र शारीरक रूपमा सक्षम बनाउँछ । यसले महिलामा सचेतना र चेतना दुबै आउँछ ।
प्रस्तुति :शेरबहादुर ऐर/धनगढी
अदालतले बर्खास्त एसपीको बयान लियो
प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी (उजुरी सहित)
श्रीमानलाई स्थायी बन्ध्याकरण गर्न दिदैनन्, महिला
निर्मला हत्याकाण्ड : प्रमाण नष्ट गर्ने बर्खास्त एसपि अदालतमा हाजिर